Fiofanana fahadimy nokarakarain’ny SASS – CNaPS - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
“Tena tombontsoa ho ahy mpitantana sekoly no nanatrika ny fiofanana nomen’ny Cnaps” hoy Rakotoarisoa Adolphe Gabriel mpitantana sekoly tsy miankina iray. Isan’ireo nisitraka ny fiofanana nokarakarain’ny Service d’Actions Sanitaires et Sociales (SASS) eo anivon’ny Cnaps ity tale ity.
Nikarakara fampiofanana ho an’ny mpitantana orinasa na sehatra hafa tokoa ny Cnaps tao Moramanga nanomboka ny alatsinainy 9 mey ary nifarana ny 11 mey izany. “Azo lazaina ho navitrika namaly ny fanasana nataonay ireo mpampiasa sy olon-tsotra teto Moramanga” hoy ny mpampiofana avy amin’ny Cnaps. “Nahatratra 131 ny isan’ireo nandray anjara raha toa ka 100 ihany izany ny taona 2012 nandalovan’ny Cnaps farany teto” hoy izy nanampy fanazavana. “Ny fampahafantarana ny lalànan’ny fiahiana ara-tsosialy no tanjona kendrena amin’izao fampiofanana tahaka izao” hoy Randrianarijaona, talen’ny Sampandraharaha misahana ny fiahiana ara-tsosialy eo anivon’ny Cnaps.
Isan’ny nampiavaka ny fampiofanana ny fahitana fa misy ireo tanora liana amin’ny fahafantarana ny tontolon’ny fiahiana ara-tsosialy. Nisy tokoa ireo mpianatra nahavita fianarana comptabilité tamin’ny andiany Mamiratra izay nalefan’ny Tale jeneralin’ny Fanalamanga hanaraka io fiofanana io. “Ny nahatsara ny fandraisana anjara amin’ny fiofanana dia tsapa ny tena dikan’ny soratra atao amin’ny comptabilité ireny. Mazava izao fa misy olona misitraka ireny vola arotsaka amin’ny Cnaps na sehatra miahy ny fahasalamana ireny” hoy Razafindratsiory, iray tamin’ireto mpianatra nanaraka ny fiofanana ireto. “Mazava tanteraka hoy ireo mpiofana ny karazana fanampiana omen’ny Cnaps ny mpiasa toy ny fanampiana ny fianakaviana, ny fanampiana raha tra-doza sy marary vokatry ny asa ary ny fisotroan-dronono” hoy ireo mpiofana. Niezaka nanazava ny mpampiofana fa teren’ny lalàna ny mpampiasa iray hanoratra ny mpiasa noraisiny hiasa ara-dalàna eny amin’ny Cnaps.
Fiofanana andiany fahadimy nokarakarain’ny Cnaps izao tamin’ity taona ity. Izany hoe fiofanana iray isam-bolana no vita. Sarotra ny hitety ny kaominina lehibe rehetra na ny hiverenana matetika amin’ny toerana iray efa nozaraina fiofanana. Matoky ny Cnaps fa ireo efa nahazo fiofanana dia hizara ny fahalalany amin’ny namany mpitantana orinasa.
Hita ho miezaka ny Cnaps handresy lahatra ny mpitantana orinasa hampiditra ny mpiasany eo anivon’ny Cnaps. Ny mpikambana kosa etsy andaniny te hilaza amin’ny Cnaps fa kely loatra ny tahan’ny raisina indrindra rehefa misotro ronono. Lafiny mila dinihana akaiky tokoa ny momba izany.